Jolay 23, 2021 Maitri Jha Banks, Ghana, ny vola
Misy banky tsy miankina 32 ao amin'ny orinasa banky sy ara-bola any Ghana. Ny fahefana ara-bola afovoan'i Ghana dia ny Bank of Ghana. Ny banky afovoan'i Ghana, izay natsangana tamin'ny 1957, dia mifehy ireo andrim-bola sy banky any Ghana. Izany koa
Raha efa manana fahazoan-dàlana hiasa ianao, na any Ghana ianao, dia azonao atao ny midina mijery ny fomba hahitana asa any Ghana. Raha tsy manana fahazoan-dàlana hiasa ianao, ny zavatra voalohany tokony hataonao
Raha Ghaneana ianao dia tokony ho fantatrao fa kely kokoa ny isan'ny firenena tsy misy visa ho an'ireo manana pasipaoro Ghaneana. Misy firenena 65 manolotra fidirana maimaim-poana. Ireo firenena ireo dia mety manana karazana antontan-taratasy isan-karazany, toy izany
Jolay 15, 2021 Maitri Jha asa, Koreana
Jolay 15, 2021 Maitri Jha Espaina, Travel, visa ho
Ireo manana pasipaoro Espaniôla dia manana fitsangatsanganana tsy misy visa any amin'ny firenena 188, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo pasipaoro dimy lehibe manerantany. Fitsangatsanganana tsy misy visa ho an'ny olom-pirenen'i Espana Raha manana pasipaoro Espaniôla ianao dia afaka mitsidika ireo firenena ireo raha tsy misy
Araka ny Global Passport Ranking Index, nahazo ny laharana faha-80 ny pasipaoro Ozbekistaniana. Mamela ny dia tsy misy visa any amin'ny firenena 60. Ireo manana pasipaoro Uzbekistani dia afaka mandeha any Rosia, Torkia, Okraina ary Indonezia tsy misy Visa. Takiana ny visa hitsidihan'ny tompon-tany Ozbekistana
Mahazo mandeha any amin'ny firenena enina tsy misy visa ny Yemenita. Ireo manana pasipaoro yemenita koa dia afaka mangataka visa 22 sy visa 14 rehefa tonga. I Yemen dia manana mponina 27.5 tapitrisa, ary Sana'a no renivohiny. Inona ny
Jolay 9, 2021 Maitri Jha Los Angeles, Travel, visa ho
Ahoana no hahazo asa any Los Angeles (LA)? Raha tsy Kalifornia na Californiaiac ianao dia mbola afaka mitady asa any Los Angeles fa tsy afaka mahazo fahazoan-dàlana hiasa irery. Mba hahazo asa ao